I-Ninoy Aquino - iPhilippine Opposition Leader Biography
Ukuxhatshazwa kweNkokheli yePhilippine Kuphela Ukuphela koMlawuli kaMarcos
Ividiyo ephazamisayo idutshulwa ngo-1983 ibonisa abasebenzi base-Filipi bebhola indiza baze balele umkhokeli wenkcaso uBenigno Aquino, Jr., ngokuqhelekileyo kuthiwa yiNinoy Aquino, ukuba ahambe. Uyamemeza, kodwa amehlo akhe abukeka akhathazekile. UAkino uyaphuma kwi-alarmon ye-Airport yase-Manila, ngelixa amadoda afanayo afintela abahlobo bakhe ukuba balandele.
Ngokukhawuleza, isandi sokudubula esilunxwemeni. Abahlobo abahambahambayo bakaAkino baqala ukulila; ezinye izandi ezandi.
I-cameraman yasentshonalanga yokufayiliza umcimbi uthatha umfanekiso wemibini emibili elele emhlabathini edutshulwe entloko. Amajoni ahlamba elinye lemizimba emotweni yenqwelo. Emva koko, amajoni afika kwi-cameraman.
U-Ninoy Aquino wayefile eneminyaka engama-50. Ngaphandle kwakhe, uRolando Galman naye wafa. Ulawulo lukaFerdinand Marcos luya kubeka uGalman icala ngokubulala uAdamino - kodwa abambalwa beembali-mlando okanye abemi basePhilippines banikezela ngolu hlobo ibango.
Imbali Yomndeni kaNinoy Aquino
UBenigno Simeon Aquino, Jr., obizwa ngokuba ngu "Ninoy," wazalwa emndenini ocebileyo wokuhlala umhlaba eConception, eTarc, ePhilippines ngoNovemba 27, 1932. Uyise wakhe, u-Servillano Aquino yAguilar, wayeqhelekileyo kwiPhilippines yasePhilippine Revolution (1896-1898) kunye nePhilippine-American War (1898-1902). Utatomkhulu u-Servillano wathunyelwa eHong Kong ngeSpain ngo-1897, kunye no- Emilio Aguinaldo kunye noorhulumente wakhe wokuguqula.
UBenigno Aquino Sr., aka "Igno," wayengumbhali wezepolitiki wasePhilippines. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBili, wayekhonza njengoSomlomo weNdibano yesiZwe kuRhulumente olawulwa yiJapan. Emva kokuxoshwa kweJapan, i-US yamkholisa u-Igno eJapane , yamvalela ePhilippines ukuba izame ukuhlaselwa.
Wafa ngesifo senhliziyo ngoDisemba ka-1947, ngaphambi kokuba ityala lenzeke.
Unina kaNinoy, u-Aurora Aquino, wayengumzala wakhe wesithathu u-Igno. Watshata ngo-1930 emva kokufa komfazi wokuqala ka-Igno, kwaye isibini sazo saba nabantwana abasixhenxe, uNinoy owayesesibini.
Ubomi bokuqala bokuNinoy
UNinoy waya kwizikolo ezizimeleyo ezizimeleyo ePhilippines njengoko wayekhula. Nangona kunjalo, iminyaka yakhe yobutsha yayisigxina. Uyise kaNinoy waboshwa njengomdibanisi xa le nkwenkwe yayineminyaka engama-12 kuphela kwaye yafa emithathu kwiminyaka kamva emva nje kokuzalwa kuka-Ninoy.
Umfundi ongenamdla, u-Ninoy wanquma ukuya eKorea ukuba abike ngeMfazwe yaseKorea eneminyaka eyi-17 kunokuba ahambe kwangoko kwipyunivesiti. Wachaza ngemfazwe yeManla Times , efumana iPhilippine Legion of Honor ngomhla we-18 ngomsebenzi wakhe.
Ngo-1954, xa eneminyaka engama-21, u-Ninoy Aquino waqala ukufundisisa umthetho kwiYunivesithi yasePhilippines. Kulapho, wayenxalenye yesebe elifanayo le-Upsilon Sigma Phi ubudlelwane njengomdlali wakhe wezopolitiko ozayo, uFerdinand Marcos.
Ukuqala kwePolitiki ye-Aquino
Ngaloo nyaka aqala ngayo isikolo somthetho, u-Ninoy Aquino watshata noCorazon Sumulong Cojuangco, umfundi ongumfundi wasekhaya waseTshayina / wasePhilippines.
Lo mbhangqwana waqala ukudibana kwindibano yokuzalwa xa babeseneminyaka engama-9 ubudala kwaye baphinde baphinda emva kokuba uCorazon abuyele ePhilippines emva kokufundiswa kweyunivesiti e-United States.
Ngonyaka nje emva kokutshata, ngo-1955, uNinoy wakhetha igosa yedolophu yaseKoncepcion, eTarlac. Wayeneminyaka engama-22 kuphela ubudala. U-Ninoy Aquino waqhubelela ukukhankanya umgca weeirekhodi zokunyulwa ebusheni: wanyulwa i-vice-rhu lumente kwiphondo kwi-27, i-rhu lumente kwi-29, kunye nonobhala-jikelele wePhilippines 'Party Liberal ngo-33. Ekugqibeleni, ngo-34, waba yintetho yencinci yesizwe.
Ukusuka kwindawo yakhe kwi-senate, u-Aquino wabetha umzalwana wakhe wangaphambili, uMongameli uFerdinand Marcos, ngokumisela urhulumente olwaphulo-mthetho, kunye nokukhohlakala nokugqithisa. U-Ninoy ngokukhethekileyo wathabatha kwi-First Lady Imelda Marcos, emgubungela "iPhilippines" uEva Peron , "nangona nje ngaba abafundi babini babedlala ngokufutshane.
INinoy yeNkokeli yeNkokeli
Ukuqhayisa, kwaye uhlala ekulungele ukuvala kakuhle, uSenator uNinoy Aquino wahlala kwindawo yakhe njengengqungquthela ephambili yaseMarcos. Wayehlala ephazamise imigaqo-mali yeMarcos, kunye nokuchitha imali kwiiprojekthi zabantu kunye nemikhosi emikhulu yempi.
Ngomhla ka-Agasti 21, 1971, i-Party ye-Liberal Party yaqhuba i-rally ye-kick-off rally. U-Ninoy Aquino ngokwakhe wayengekho. Kungekudala emva kokuba abaviwa bathathe isiteji, ukuqhuma okukhulu kwembini kwaqhaqhazela i-rally - iinqhekeza eziqhekeza kwisihlwele ngabahlaseli abangaziwa babulala abantu abasibhozo kwaye balimaza malunga ne-120 ngaphezulu.
UNinoy wamtyhola uMarcos weNacionalistas Party emva kokuhlaselwa. UMarcos ubalwa ngokugxeka "oomakhomanisi" kunye nokubamba inani elithile lamaMaoists awaziwayo.
UmThetho wokulwa kunye nokuvalelwa entolongweni
NgoSeptemba 21, 1972, uFerdinand Marcos wachaza umthetho we-karate ePhilippines. Phakathi kwabantu ababethelwa kwaye bavalelwa ngamatyala ayenziwe nguNinoy Aquino. I-Ninoy ibhekene neetyala zokubulala, ukuchithwa kunye nezixhobo zokulwa, kwaye wavalelwa enkundleni yemangcwabo yengwenya.
Ngo-Epreli 4, 1975, u-Ninoy Aquino wahamba ngesitelo sokulamba indlala ngokubhikisha inkqubo yenkundla yempi. Nangona isimo sakhe somzimba sancipha, uvavanyo lwakhe lwaqhubeka. I-Aquino encinci yenqaba yonke ukutya kodwa iipilisi zetyuwa kunye namanzi kwiintsuku ezingama-40 kwaye zinciphisa isisindo ukusuka kuma-kilogram ezingama-120 ukuya kuma-36 kilo (80 iipounds).
Abahlobo kunye neentsapho ezichaphazelekayo zikaNinoy bamqinisekisa ukuba aqale ukutya kwakhona emva kweentsuku ezingama-40.
Uvavanyo lwakhe lwadlulela iminyaka emininzi, nangona kunjalo, de kube nguNovemba 25, 1977. Ngaloo mini, umkhosi wamkhosi wamfumana unetyala kuwo onke amanqaku. I-Ninoy Aquino yayiza kubulawa yinqwaba yokudubula.
Ukusuka entolongweni, uNinoy wadlala indima ebalulekileyo yenhlangano kwintlanganiso yepalamente ye-1978. Waseka iqela elitsha lezopolitiko, elibizwa ngokuthi "Amandla Abantu" okanye uLasas Ng Bayan , i-LABAN efutshane. Nangona iqumrhu le-LABAN linokuxhaswa ngokubanzi koluntu, bonke abaviwa babo balahlekelwa ukhetho olukhethiweyo.
Nangona kunjalo, unyulo lwangqina ukuba uNinoy Aquino angenza njengento ekhuselekileyo yezopolitiko nakwieseli egcinwe yedwa. Ukholo kunye nokungafihli, nangona isigwebo sokufa esilenga phezu kwentloko yakhe, wayeyingozi enkulu kuMbuso waseMarcos.
Iingxaki zeNinoy Heart and Exile
Ngethuba elithile ngo-Matshi ka-1980, kwi-echo yamava kayise, u-Ninoy Aquino wahlaselwa yintliziyo yakhe entolongweni yakhe. Ukuhlaselwa kwentliziyo yesibini kwi-Heart Centre yePhilippine kubonise ukuba wayenomthi ovaliweyo, kodwa u-Aquino akazange avumele abagqirha basePhilippines ukuba basebenze kuye ngenxa yokwesaba ukudlala kakubi nguMarcos.
U-Imelda Marcos wenza isimangalo ehambela egumbini lika-Ninoy esibhedlele ngoMeyi 8, 1980, emnika i-furlough yezokwelapha eUnited States ukwenzela ukuhlinzwa. Wayenemiqathango emibini, nangona kunjalo; UNinoy kwafuneka athembise ukuba abuyele ePhilippines, kwaye wayefanele afunge ukuba angamgxeka umbuso waseMarcos ngenkathi e-US Ngobo busuku, u-Ninoy Aquino kunye nentsapho yakhe bafika kwinqwelo eya eBallas, eTexas.
Intsapho yama-Aquino yanquma ukungabuyeli ePhilippines emva kokuba uNinoy abuyele ekutheni asebenze. Basuka endaweni eya eNewton, eMassachusetts, kungekude neBoston. Kulapho, iNinoy yamkela ubudlelwane ukusuka kwiYunivesithi yaseHarvard kunye ne- Massachusetts Institute of Technology , eyamvumela ukuba ukhululeke ukunika iindidi zezifundo aze abhale iincwadi ezimbini. Nangona isibambiso sakhe sangaphambili ku-Imelda, uNinoy wayegxeka kakhulu ulawulo lukaMarcos xa ehlala e-US
Ekuqaleni kowe-1983, impilo kaFerdinand Marcos yaqala ukuphazamiseka, kwaye i-Philippines yayibambelela entsimbi. U-Aquino wayekhathazekile ukuba xa kwenzeka ukufa ngokukhawuleza kukaMarcos, ilizwe liya kuhlaselwa kwiintshukumo kwaye urhulumente ogqithiseleyo unokuvela.
U-Ninoy Aquino wanquma ukuthatha ingozi yokubuyela ePhilippines, eqonda ngokucacileyo ukuba unokuvalelwa okanye abulawe ngqo. Urhulumente waseMarcos wazama ukukhusela ukubuyela kwakhe ngokuguqula ipasipoti yakhe, ukumkhanyela i-visa, kunye nezilumkiso zeenqwelo-moya zamazwe ngamazwe ukuba abaza kuvunyelwa ukuba bavumele ukuhlawulela ukuba bazama ukuzisa u-Aquino ezweni.
Ukususela ngomhla ka-Agasti 13, 1983, u-Aquino wagijimela ukuhamba ngeeveki ukusuka eBoston ukuya eLos Angeles, eSingapore, eHong Kong naseTaiwan ukuya kwindawo yokugqibela yeManila. Ngenxa yokuba uMarcos wayecebile ubudlelwane bezobudlelwane kunye neTaiwan, urhulumente apho kwakungekho mbopheleleko wokusebenzisana nomgomo wakhe wokulawula iNinoy Aquino kude neManila.
Njengoko i-China Airlines Flight 811 yehla kwi-Airport ye-Manila kwi-Agasti 21, 1983, u-Ninoy Aquino walumkisa iindwendwe zezinye iintlanga ezazihamba naye ukuba zilungele ikhamera zabo. "Kwimiba emithathu okanye emine imizuzu inokuphelela," watsho ngokuzikhumbuza isisa. Imizuzu emva kokuba indiza ithinte; wayefile.
Ilifa likaNinoy Aquino
Ngaphambi komngcwabo ovulekileyo, unina kaNinoy, u-Aurora Aquino wagxininisa ukuba ubuso bakhe bonyana buhlale bukhohlisiwe ukuze abalilayo babebone ngokucacileyo inxeba lebhola. Wayefuna ukuba wonke umntu aqonde "into abenze ngayo kwonyana wam."
Emva kwexesha lokungcwaba kweeyure ezili-12, apho kuqikelelwe ukuba izigidi zabantu zibini, uNinoy Aquino wangcwatywa eManla Memorial Park. Inkokheli ye-Liberal Party ebizwa ngokuba yi-Aquino ebizwa ngokuthi "ngumongameli omkhulu" asizange sibe nayo. Abavakalisi abaninzi bafanisa naye nomholi we-anti-Spanish, u- Jose Rizal .
Ephefumlelwe ngophalazo lwenkxaso ayenayo emva kokufa kukaNinoy, owayengumhlaziyi- Corazon Aquino waba yinkokeli yokunyusa kukaMarcos. Ngowe-1985, uFerdinand Marcos wabiza i-snap ukhetho likamongameli ukuze aqinise amandla akhe. UCory Aquino wagijima. Ngomhla kaFebruwari 7, 1986, ukhetho, uMarcos wavakaliswa ukuba uyaphumelela kwiphumo elikhohlisayo.
UNksk Aquino wabiza ukubonakalisa okukhulu, kwaye izigidi zabantu basePhilippines babethelana naye. Kuloo nto yaziwa ngokuba yi "People Power Revolution," uFerdinand Marcos wagxothwa ngaphandle kwesikhundla waza wathunyelwa kwinyanga leyo. NgoFebruwari 25, 1986, uCorazon Aquino waba nguMongameli we-11 wePhilippine Republic kunye nomongameli walo wesibini wokuqala .
Ilifa likaNinoy Aquino alizange liphele kunye nomongameli wakhe weminyaka emithandathu, owathi wambona imigaqo yedemokhrasi iphinda ingene kwiipolitiki zesizwe. NgoJuni 2010, unyana wakhe uBenigno Simeon Aquino III, owaziwa ngokuba ngu "Noy-noy," waba nguMongameli wasePhilippines. Ngaloo ndlela, imbali yezopolitiko yenkcubeko ye-Aquino, ekhutshwe ngokubambisana, ngoku ibonisa inkqubo evulekileyo kunye nentando yeninzi namhlanje.
EKanow, eStanley. Kwimifanekiso Yethu: Ubukhosi baseMelika e-Philippines , eNew York: I-Random House, ngo-1990.
UJohn MacLean, "IPhilippines Ukhumbula uAugino Killing," Iindaba ze-BBC, ngo-Agasti 20, 2003.
UNelson, uAnne. "Kwi-Grotto ye-Pink Sisters: Uvavanyo lwe-Cory Aquino lwe-Faith," uMama Jones Magazine , uJan 1988.
Nepstad, uSharon Erickson. Iinguqulelo ezingapheliyo: Ukuphikiswa koLuntu kwiXesha lama-20 leminyaka , i-Oxford: i-Oxford University Press, ngo-2011.
I-Timberman, uDavid G. Umhlaba ongatshintshiyo: Ukuqhubeka kunye nokutshintsha kwiPolitiki yePhilippines , eSingapore: Iziko le-Southeast Asia Studies, ngo-1991.
Umlawuli waseMughal India i-Aurangzeb
Biography kaWilliam Wallace
I-Biographie ye-Life Profile yomProfethi Muhammad
Ukukhusela kunye nokuPhilisa iBlisters
Eyona ndlela iCharlie Kelly Quotes
Iimoto eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo ngaphantsi kwama-$ 50,000
Isikhokelo sokuPhambi kweColombia yaseCuba
Abathengi baxwayiswa ngeeWebhu zeeWebhsayithi zeNgxowa-mali ze-Payday
Indlela yokutshintsha igama lekholomu kwi-MySQL
Khangela iMaphule, i-Sycamore, i-Yellow-poplar, i-Sweetgum Leaves
Usuku kwi-Set of 'General Hospital'
IHollywood yoNcedo lweeNtshontsho